Killer သည် Sonic Beat Records ကိုစတင်ရန် Composer Sebastian Robertson နှင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုခြေရာခံသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » လူသတ်သမား Sonic ဘိ Records ကိုစတင်ရန်မှ Composer Sebastian Robertson ကအတူအပေါင်းအဖေါ်များသီချင်းများ
Sebastian Robertson က
ကနဦးလွှတ်ပေးရန်မူရင်းဂီတ၏ 170 အယ်လ်ဘမ်ထက်ပိုမိုပါဝင်သည်
စန်တာမော်နီကာ - - လူသတ်သမားသီချင်းများတစ်ဦးက Universal ထုတ်ဝေရေးထုတ်လုပ်မှုဂီတကုမ္ပဏီပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုဂီတတံဆိပ် Sonic ဘိ Records ကိုဖွင့်ဖို့တေးရေးဆရာနဲ့ဂီတထုတ်လုပ်သူ Sebastian Robertson ကအတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ကနဦးလွှတ်ပေးရန်ခေတ်ပြိုင်စတိုင်များ, အမျိုးအစားများ, themes များ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်ထား 170 အယ်လ်ဘမ်ထက်ပိုမိုပါဝင်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းခြင်း, streaming ဒေါင်းလုပ်နှင့်မှတဆင့်လိုင်စင်ယခုရရှိနိုင် လူသတ်သမားသီချင်းများ website က။
Sonic ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတ်တမ်း Beat ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတေးရေးဆရာအဖြစ် Robertson ကရဲ့ကျယ်ပြန်နှင့်လူအများကလေးစားအလုပ်အပေါ်တည်ဆောက်။ နဲ့သူ့ရဲ့ရှည်လျားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများ ဝင်ရောက်ခွင့် ဟောလိဝုဒ် နှင့် MTV, Robertson က 100 scripted နှင့် unscripted စီးရီး, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အားကစားအစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့တေးရေးဆရာအဖြစ်ဂုဏျထက်ပိုရှိပါတယ်။
"Sebastian နက်ရှိုင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြစ်များနှင့်လူကြိုက်များဂီတ၏အားလုံးအကိုင်းကိုဖြတ်ပြီးအနုပညာရှင်မှဆက်သွယ်မှုများကိုအတူတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါရမီတေးရေးဆရာနဲ့ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဆိုပါတယ် လူသတ်သမားသီချင်းများ ထုတ်လုပ်မှုတဲ့ Carl ပီးလ်၏ VP ။ "တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်တေးရေးဆရာအဖြစ်သူ့အရသာနဲ့တီထွင်မှုဒီအလွ, ကျယ်ပြန့်-အထိစုဆောင်းမှုအတွက်သိသာသည်။ "
Sonic ၏အဓိကထိုကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်, ကျောက်, အိမ်သူအိမ်သားဂီတနှင့်အေးမြ, jazz အဖြစ်စတိုင်များအမျိုးမျိုးသို့ forays အတူခေတ်ပြိုင်ပေါ့ပ်နှင့်စိတ်ဓါတ်များဂီတအပေါ်စင်တာ Records ကို Beat ။ မကြာသေးမီက Robertson ကစိတ်ခံစားမှုဟစ်ဟော့နှင့်ခေတ်သစ်ဝိညာဉျသ၏နောက်ဆုံးပေါ်လှိုင်းတံပိုးရှာဖွေစူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းခြင်းအတွက်ပုဒ်အားလုံးထုတ်လုပ်မှုအသုံးပြုရန် created နှင့်လူကြိုက်များပြပွဲကို formats, ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်တေးသံများ, စျေးကွက်မီဒီယာနှင့်ကြော်ငြာကိုသို့ချောမွေ့စွာ edited ခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
"ငါသည်လူငယ်စျေးကွက်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လေးတွေနဲ့တူနှင့်ကိုနားထောင်နေကြတယ် fit မှအသစ်လုပ်ထုတ်လုပ်ရန်," Robertson ကဆိုပါတယ်။ "ဂီတကြီးကြပ်ရေးမှူးကလိုအပ်သည့်အခါကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်များကိုက်ညီသောပုဒ်နှင့်အတူအဆင်သင့်ပါပဲ။ "
Robertson ကကျောက်, အလိပ်ဒဏ္ဍာရီရော်ဘီ Robertson က၏သားဖြစ်၏နှင့်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းခညျြအနှောအတွေ့အကြုံ (နှင့်တစ်ဦးသားသမီးရဲ့စာအုပ်ရေးသားသူအဖြစ်အောင်မြင်မှုရ) ပြီးနောက်သူ ပို. ပို. ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတရေးသားခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ မှန်မှန်အပေါ် featured ခံရနှင့်အတူ ဝင်ရောက်ခွင့် ဟောလိဝုဒ် နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့် ဟောလိဝုဒ် အသက်ရှင်သော, Robertson ကယ့်ဂီတကဲ့သို့သောရှိုးပွဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည် အပို, ရယ်စရာ, အား NBC အားကစားဆိုင်ရာ နှင့် အဆိုပါလှေဟာ Off လတ်ဆတ်တဲ့။ သူကဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များအတွက်ရမှတ်ရေးသားခဲ့သည် အကျဉ်းထောင်မှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူလမ်းညွှန် အဖြစ်ရုပ်ရှင် အရှကျကှဲလမ်းလျှောက် နှင့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်ကားများတွင် featured မိတျဆှေမြားနှငျ့မကြာခဏပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဒံယလေသဒေးဗီးစ်နှင့်အတူသူပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်သီချင်းများ အဖုံးဗားရှင်း နှင့် ဗာတီကန်မှတ်တမ်းများ။ သူအယ်လ်ဘမ်အပေါ်ဗုံကစားခြင်း, မိမိအဘ၏ဂီတစီမံကိန်းများအများအပြားကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ် အဆိုပါ Native အမေရိကန်များအတွက်ဂီတ နှင့်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို Clairvoyant ဖြစ်လာလုပ်နည်း။
Robertson ကနဲ့သူ့ရဲ့အသစ်သောမိတ်ဖက်ကပြောပါတယ် လူသတ်သမားသီချင်းများ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပြည့်အဝစက်ဝိုင်းတတ်၏။ သူကပထမဦးဆုံးရုပ်သံလွှင့်မှုအတွက်ဂီတရေးသားခြင်းစတင်သောအခါသူ၏အပုဒ်အတော်ကြာတဲ့အပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လူသတ်သမားသီချင်းများ တံဆိပ်။
"လူသတ်သမားသီချင်းများ ငါထုတ်လုပ်မှုဂီတကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ Killer မှတဆင့်ကြောင့်အစဉ်အမြဲငါ့နှလုံး၌အထူးအရပျကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ် "ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "နှစ်အကြာတွင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည် လူသတ်သမားသီချင်းများ'' ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ က Universal Music ကိုမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းစူပါစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ "
လူသတ်သမားသီချင်းများ ထုတ်လုပ်မှုဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာနှင့်အပြန်အလှန်မီဒီယာများအတွက် Pre-ရှင်းလင်းဂီတများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 3,500 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်များ, အထဲကနေ 44 တက်ကြွအယ်လ်ဘမ်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူ လူသတ်သမားသီချင်းများ catalog တိုင်းအမျိုးအစားအထိချဲ့ကာနှင့်ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးဆန်းသစ်တေးရေး, အနုပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူအချို့ထံမှမူရင်းအကျင့်ကိုကျင့်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါပရီမီယံ catalog ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သီးသန့်အသံသွင်းခြင်းနှင့်အသစ်သောဂီတ updates များကိုအတူတိုးမြှင့်ထားသည်။ friendly, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ထောက်ခံမှုဂီတရှာဖွေရေးအထူးကုများနှင့်လိုင်စင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ကတဆင့်အမြဲရရှိနိုင်ပါသည်။ ဂီတကိစ္စရပ်များမှာထုတ်လုပ်မှုဂီတကျွမ်းကျင်သူများအပေါ်အားကိုးရတဲ့အခါ လူသတ်သမားသီချင်းများ.
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ထုတ်လုပ်မှုဂီတ လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ 2019-08-15
ယခင်: အဲလက်စ် Martinez Univision NOTICIAS နှင့်အသံရောနှောအနာဂတ်မှာမိမိအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေး
နောက်တစ်ခု: စတူဒီယို Manager ကို / ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်ထောက်